स्ट्रिमहरू सुरु गर्नुहोस्, फोटोहरू र भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहोस्
स्ट्रिमहरू सुरूवात गर्नुहोस्। फोटो र भिडियो पोष्ट गर्नुहोस्।
स्ट्रिमहरू, पोष्ट फोटो र भिडियोहरू सुरूवात गर्नुहोस्
U LIVE एक प्लेटफर्म हो जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले चित्र र भिडियोहरू साझा गर्छन्, भेट्नुहोस् र अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईंको सामग्री साझेदारी गर्नुहोस् वा वेब क्यामेराको माध्यमबाट दर्शकहरूसँग च्याट गर्न स्ट्रिम सुरू गर्नुहोस्।
दृश्यबाट तपाईंको कार्ड वा ई-वालेटमा पैसा फिर्ता गर्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै कार्यक्रमको प्रसारक बन्नुहोस्
एउटा कूल कार्यक्रम सुरू गर्नुहोस् र दर्शकहरूसँग अधिक अन्तरक्रियाशीलता थप्नुहोस्। भर्खरको समाचारको बारेमा छलफल गर्नुहोस्, एक स्ट्यान्ड-अप प्रदर्शन गर्नुहोस् वा छिटो खोर्सानी खाने कार्यशाला शुरू गर्नुहोस् - यो यू लाइभमा पनि सम्भव छ!
कुराकानीमा कुराकानी गर्दै
सन्देशहरू दर्शकहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ त्यसैले तपाईं प्रत्येक टिप्पणीको लागि सिक्का पाउनुहुन्छ।
एउटा निजी कुराकानीले हरेक मिनेटमा तपाईंलाई बढी पैसा कमाउँछ।
दर्शकहरूले स्ट्रिमको लागि १ क्लिकमा सिक्का पठाउँदै धन्यवाद दिन सक्छन्।
गतिविधिहरू छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं प्रदर्शन गर्न तयार हुनुहुन्छ र दर्शकहरूले तपाईंलाई सिक्का देखाउन शो पठाउँछन्।
अफलाइन पैसा कमाउनुहोस्
तपाईंको ड्यासबोर्ड निष्क्रिय आय को एक स्रोत हो। फोटो र भिडियो पोष्ट गर्नुहोस्, राम्रो वर्णन जोड्नुहोस् र दृश्य संकलन गर्नुहोस्।
फोटो र भिडियोहरू
प्रत्येक फोटो वा भिडियो दृश्य एक दर्शक द्वारा भुक्तान गरिएको छ; प्रत्येक views० दृश्यहरू - U LIVE सेवा द्वारा
समावेश गर्ने प्रयोगकर्ताहरू
Ulive.Chat मा लिंक साझा गर्नुहोस् सामाजिक जालमा, यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा पोष्ट गर्नुहोस् वा तपाईंको साथीहरूलाई पठाउनुहोस् तपाईंको संलग्नताहरूको खरीदबाट रूचि लिन।
तपाईंको शो को विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस्
U LIVE निर्मित फंक्शनल प्रयोग गरेर थिमेटिक स्ट्रिमहरूलाई अनुमति दिन्छ। तपाईंले क्यामेराको अगाडि के गर्ने भनेर सोच्नु पर्दैन! एउटा विषयवस्तु र गतिविधिहरू छनौट गर्नुहोस्, ड्रेस आउट कोडको अनुसार तपाईंको आउटफुट तयार गर्नुहोस् र प्रशंसकहरूसँग च्याटबाट कमाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई तपाईंको कार्यक्रम निर्देशित गर्न दिनुहोस्।
नियमित रूपमा प्रशिक्षण संग समस्या छ? योग वा पाइलेट्सको समयमा सिक्का आर्जन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्!
व्यक्तिलाई तपाईंको दैनिक जीवन देखाउनुहोस् र दर्शकहरूबाट काम गरेर यसलाई रमाईलो बनाउनुहोस्।
मिठो दाँत छ? क्यामेरामा मिठाई खानका लागि सिक्का पाउनुहोस्। दर्शकहरूलाई देखाउनुहोस् तपाईंको कार्ब कति मनपर्दछ!
तपाईलाई मनपर्दो कुराकानी गर्नुहोस्
ULIVE स्ट्रिम मात्र दुई क्लिकमा सुरू गरियो। प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कति सजिलो छ!
स्वत: ट्रान्सलेटरमा निर्मित
तपाईंको मातृभाषामा विदेशीहरूलाई सन्देश पठाउनुहोस् र बिल्ट-इन स्वत: ट्रान्सलेटरले बाँकी काम गर्दछ।
धेरै प्रसारकहरू गोप्य रूपमा आफ्नो पहिचान छोड्न रुचाउँछन्। U LIVE ले तपाईंलाई आरामदायक बेनामी स्तर छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। विशेष देशहरूको लागि केवल प्रयोगकर्ता अवरोध र कालोसूची प्रयोग गर्नुहोस्।
सजिलो पैसा निकासी
प्रत्येक coins००० सिक्का $ १ मा विनिमय गर्नुहोस्। न्यूनतम फिर्ता रकम $ 30 हो।
VISA, मास्टरकार्ड, Bitcoin, SEPA, Bitsafe सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा पैसा फिर्ता लिन एक इनभ्वाइस प्राप्त गर्नुहोस्।
विश्वास नगर्नुहोस् यो सजिलो छ?
यसलाई जाँच गर्नुहोस् र आज कमाउनुहोस्!